मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज
काठमाडौँ । यदि तपाइ हामी हरु तौल घटाउन चाहने हो भने यसका लागी सन्तुलित भोजन गर्न जरुरी हुन्छ । तौल घटाउनका लागी खाना विशेष ध्यान दिनु पर्छ की के खान हुन्छ र के खान हुँदैन् । यति मात्र होयन कुन खाना कुन समय खाने र कुन समय नखाने । यदि तौल कम गर्न चाहने हो भने रातकिो बेला यि पाँच चिज खान हुँदेन् ।
पिज्जा– हर उमेर तहका मानिसका लागी पिज्जा लोकप्रिय खानेकुरा हो । तर यसलाई रातीमा खानु राम्रो मानिदैन् किनकी यसमा चिजको मात्रा बढी हुन्छ । साथै पिज्जामा चिनी र रिफाइन कार्ब्स हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
नट्स– बादाम, अखरोट, काजू या पिस्ता जस्ता खाने कुरा स्वास्थका लागी अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । यि खाने कुरामा क्यालोरी पनि उत्तिकै मात्रामा हुन्छ । त्यसैले पनि सुत्ने बेला यि कुरा सेबन गर्न हुँदैन् किनकी सुत्ने बेला शारीरीक गतिबिधी हुँदैन् । त्यसैले सुत्ने बेला यि खाने कुराबाट टाढै रहन पर्छ ।
फ्रूट जू – सुत्ने बेला जुसको सेबन गर्न हुँदैन् । बजारमा पायने जुसमा चिनी र सोडा रहेको हुन्छ ।यसका साथ फलफुलमा पाइने अबश्यक तत्व पनि नस्ट हुन्छ । त्यसैले फ्रूट जूस रातमा मात्र होइन दिनमा पनि सेबन गर्न हुँदैन् । यदि आमी सँग जसर भए घरमै बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ ।
चॉकलेट– चकलेट खानुमा पनि केही फाइदा त हुन्छन तर सुत्नु अघि चकलेट खानु राम्रो मानिदैन् । किनकी यसमा बढी मात्रामा क्यालोरी पाइन्छ ।
आइसक्रीम – सुत्नु पहिले आइसकृम पनि खान हुँदैन् । बजारमा उपलब्ध आइसकृममा अधिक मात्रामा फ्याट र आर्टिफिशियल सुगर हुनुका सार्थ अत्यन्तै धेरै क्यालोरी पनि हुन्छ ।
टाउकोमा चायाँ छ ? यी हुन हटाउने घरेलु अचुक उपाय